भिडियो – PuraKhabar
मेस्सीले पेनाल्टी मिस गरेपछि रबि लामिछानेले किन यस्तो भने ? (भिडियो सहित)
काठमाडौ – यतिबेला बिश्वकप फुटबल २०१८ को लहर बिश्वभरी नै छ । फुटबलप्रेमी दर्शकहरु टेलिभिजनमा वा मैदानमा खेल हेरेर बिश्वकपको मजा उठाईरहेका छन् । ४ बर्षमा आउने फुटबलको महाकुम्भ नेपालमा पनि छाईरहेका छ । नेपाली फुटबल प्रेमी दर्शकहरु आ आफ्नो मनपर्ने देशलाई सपोर्ट गरिरहेका छन् । सैबिच शनिबारको खेल निकै रोचक रह्यो । जसको चर्चा सर्वत्र छ । आईसल्याड जुन पहिलो पटक बिश्वकप खेलेको देश र अर्जेन्टिना जो वल्र्डकपको दाबेदार मानिएको देश बिचको खेलमा ए एकको बराबरी भएपछि त्यसको चर्चा सबै तिर छ । खेलमा चर्चित खेलाड मेस्सीले पाएको पेनाल्टी…
सार्वजनिक कार्यक्रममा किन रोइन् करिश्मा मानन्धर ? (भिडियो)
काठमाडौँ। केही दिन अघि चलचित्रकर्मी महिला सशक्तीकरण समिति तथा चलचित्र विकास बोर्डको आयोजनामा सम्पन्न अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यक्रममा पुराना पुस्ताका कलाकार मिथिला शर्मादेखि अहिलेकी हट नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहसम्म सम्मानित भएका थिए । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रदेशसभा ३ की प्रमुख अनुराधा कोइरालाले कलाकारहरू, मिथिला शर्मा, सकुन्तला शर्मा, करिष्मा मानन्धर, दीपाश्री निरौला तथा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई सम्मान गरेकी हुन् । उक्त कार्यक्रमका मिथिला शर्माको मन्तव्य सुन्दा नायिका करिश्मा मानन्धरले आँशु रोक्न सकिनन्। डिसी नेपालबाट हेर्नुस् भिडियो। Purbeli TV पूवैर्ली न्युजको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्…
१६ बर्षे युवकले गर्लफ्रेन लै गर्भवती बनाए पछी आमाले येस्तरी रामधुलाई गरिन हेर्नुहोस् भिडियो सहित …
कारमा बसेर बिच सडकमा फोहोर फाल्ने ब्यक्तिको सातो लिइन् नायिका अनुष्का शर्माले, विराटले पनि अनुष्कालाई सघाए (भिडियो)
एजेन्सी । केही समयअघि मात्रै वैबाहिक बन्धनमा बाँधिएको चर्चित जोडी हो बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीको जोडी । जो विहे अघि र पछि पनि ब्यापक चर्चामा रहेको छ । चर्चामा नै रहेका बेला यो चर्चित जोडीले समाजमा अभद्र काम गर्ने ब्यक्तिलाई सम्झाउने काम गरेको छ । बीच सडकमा कारमा बसेका एक व्यक्तिले सडकमा फोहोर फालेको देखेपछि अनुष्काले ती व्यक्तिलाई कारभित्रबाट हप्काएको एउटा भिडियो विराटले सार्वजनिक गरेका छन् । अनुष्काले ती व्यक्तिलाई कारभित्रबाट हप्काएको देख्न सकिन्छ । अनुष्काले ती व्यक्तिलाई थर्काउँदै भनकी छन्, सडकमा किन…
गगन थापाको जोसिलो भाषण: प्रधानमन्त्री केपी ओलि राजा महेन्द्र जस्तो हुन खोज्दैछन सबै लाई डरमा राखेर देश चलाउन खोज्दै छन् – हेर्नुहोस भिडियो र सक्दो सेयर गर्नुहोस
गगन थापाको जोसिलो भाषण: प्रधानमन्त्री केपी ओलि राजा महेन्द्र जस्तो हुन खोज्दैछन सबै लाई डरमा राखेर देश चलाउन खोज्दै छन् – हेर्नुहोस भिडियो र सक्दो सेयर गर्नुहोस ﻿ Politician Gagan Thapa had gaveapowerful and satirical speech at Kathmandu where he had spoke about the recent work of Government which is not favorable for the prosperity of Nepal and Nepali. Gagan Thapa shared that KP Oli’s act as beingaPrime Minister of Nepal is not as he promised during his election campaign rather he is moving towards the…
रविलाई बचाउन 50 लाख नेपालीले गरे यस्तो आपिल: रवीलाई माया गर्ने सबै हेर्ने पर्ने खबर (भिडियो ) सक्दो सेयर गरौ
रविलाई बचाउन 50 लाख नेपालीले गरे यस्तो आपिल: रवीलाई माया गर्ने सबै हेर्ने पर्ने खबर (भिडियो ) सक्दो सेयर गरौ भिडियो तल छ ﻿ मेघराज सापकोटा/युएई — नेपालीहरुले पहिलो पटक मेट्रो ट्रेन चढेको दुबईमा नै हो । पहिलो पटक वाईफाई युक्त बस चढेको पनि दुबईमा नै हो । मेट्रो ट्रेन र मेट्रो बसमा यात्रा गर्दा नल कार्ड प्रयोग गर्न सिकेको पनि दुबई आएरै हो । दुबई आउनु अघि कसैले पनि उनीहरुलाई न त मेट्रो बस कसरी चढ्ने सिकायो न त मेट्रो ट्रेनमा भाडा कसरी तिर्ने भनेर तालिम दियो । तै…
अर्जेन्टिना लाइ जिताउन को लागि पुजा गर्दै नेपालि
अर्जेन्टिना लाइ जिताउन को लागि पुजा गर्दै नेपालि ﻿
पाल्पाको झुम्छामा एकाएक बिजुलीको पोल हल्लिन थालेपछि दिनहु लाग्न थाल्यो भिड (भिडियो)
पाल्पाको झुम्छामा एकाएक बिजुलीको पोल हल्लिन थालेपछि दिनहु लाग्न थाल्यो भिड ﻿
तिन करोड नेपालीलाई आयो खुशीको खबर चिनले १ लाख नेपालीलाई रोजगार दिने
तिन करोड नेपाली लाई आयो कुशिको खबर चिनले १ लाख नेपालीलाइ रोजगार दिने भनेपछि ओलीलाइ भारतको चेतावनी हेर्नुहोस भिडियो सहीत तिन करोड नेपाली लाई आयो कुशिको खबर चिनले १ लाख नेपालीलाइ रोजगार दिने भनेपछि ओलीलाइ भारतको चेतावनी हेर्नुहोस भिडियो सहीतकाठमाडौं ,नेपाल पटक-पटक भारतको चेतावनी पछि पनि झुकेन नेपाल चिनले १ लाख भन्दा धेरै नेपाली लाई आफ्नो देसमा रोजगार दिने भएपछि भारतले नेपाललाई फेरी आर्को चेतावनी दिएको छ ! नेपालको बिकासमा पटक-पटक बाधा बनेको छ नेपालको बिकसमा बाधा बन्दै आएको छ आखिर किन ? नेपालको बिकासमा आफ्नो देसको ब्यपारमा बाधा बन्दै…
पहिलो पटक मिडियामा मेनुका र पूजा, भयो यस्तो कुराकानी ! के भयो कुराकानी (भिडियो)
काठमाडौं । एसएलसी दिन सदरमुकाम आएको बेला पूजा बोहोरामाथि सामुहिक बलात्कार भएको थियो । बि.सं.२०६८ सालको यस घटनापछि उनले अनेक कष्ट सहनु प¥यो । उनलाई रक्षा नेपालकी मेनुका थापाले आश्रय दिइन् । काठमाडौंमा ल्याएर मुद्दा लड्नेदेखि बस्न र पढ्न सहयोग गरिन् । पूजाले न्याय माग गर्दै तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यलाई पत्र लेखेपछि पूजाले थप सहानुभूति पाएकी थिईन् । पूजाले भनेकी छन्, ‘म रक्षा नेपाल र सञ्चालक मेनुका थापाबिरुद्ध सडकमा आएकी होइन, उहाँले मलाई पर्दाखेरी साथ सहयोग गर्नुभयो । तर, जति मलाई सहयोग गर्नुभयो, त्यो भन्दा बढी अत्याचार गर्नुभयो, शोषण गर्नुभयो…